မိန်းကလေးများ၏ အယုံသွင်းစကားများကြောင့် သင်ဘဝ ရေတိမ်မနှစ်ပါစေနှင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မိန်းကလေးများ၏ အယုံသွင်းစကားများကြောင့် သင်ဘဝ ရေတိမ်မနှစ်ပါစေနှင့်
မိန်းကလေးများ၏ အယုံသွင်းစကားများကြောင့် သင်ဘဝ ရေတိမ်မနှစ်ပါစေနှင့်
Posted by moesatrain on Jul 20, 2010 in News | 8 comments
ယောက်ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ချစ်ကြိုက်ကြပြီဆိုရင် မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ကျားလေးတွေကို အယုံ သွင်းတတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ကျားလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရဖို့ဆိုရင် နည်းမျိုးစုံပြော ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ အဲလိုမျိုး စကားတွေကို ယောက်ကျားလေးတွေ ရှောင်နိုင်ရအောင်လို့ နတ်သားကမျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ မောင် ချစ်ဘယ်လိုမှမနေနိုင်လို့ပါလို့ သင်ကောင်မလေးကများပြောလာခဲ့ရင်
သင်ပြန်ပြောရမဲ့ စကားက တစ်ခွန်းထဲပါ။ မင်းခေါ်တိုင်းလိုက်ရရင်အောင် ငါကိုဘယ်လိုကောင်းများ မှတ်နေလဲ လို့ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းလွှတ်လိုက်ပါ။ ဒါမှ သင်ဘဝရေမရှိတဲ့ ချောင်းမှာ နှာခေါင်းမနှစ်တော့ မှာပါ။
၂။ နှစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောချင်လို့ပါ လို့ပြောလာခဲ့ရင်
ဘယ်တော့မှ မလိုက်ပါနှင့် သင်ဘဝ သူများတံတွေးခွက်မှာ မှောက်ရက်မျှောသွားပါလိမ့်မည်။ လူမြင်းကွင်းတွင် လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆို၍ ရပါသည်။ သင်ကို လိမ်ညာခေါ်ဆောင်နေသည် ကိုသတိပြုမိပါစေ။
၃။ မောင်ကို တကယ်ချစ်တာပါ၊ အရမ်းလည်းတန်ဖိုးထားပါတယ် လို့ပြောဆိုလာလျှင်
တကယ်ချစ်မချစ်ဆိုတာ နှစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရုံနှင့် သက်သေပြသည် မဟုတ်ပါ။ အချိန်တွေက အချစ်ကို တန်ဖိုးထားမထား ဆိုတာ အလိုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ပါးစပ်က ပြောနေသည်ထက် နှလုံးသားကပြောသည်က မှပိုလေးနက်ပါလိမ့်မည်။
၄။ ချစ် ကိုတကယ်ချစ်တာဆိုရင် အလိုလိုက်မှာပါနော် ဟု
ပတ်ချွှဲနှပ်ချွှဲ ပြောနေတဲ့ စကားမျိုးကို မယုံကြည်မိပါစေနှင့်။ သင်ကို အပြစ်မကင်းသလို ခံစားရအောင် ပြောတဲ့စကားမျိုးပါ။ အချစ်ဆိုတာ ကိုခုတုံးလုပ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ အယုံသွင်းတာ ကို သင်သတိကြီးစွာ ထား ကာမှ သင်ဘဝတန်ကာကျပေလိမ့်ပါမည်။
၅။ ချစ်နဲ့မောင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းက ပိုလေးနက်လာမှာပါလို့
သင်ရဲ့ စောင့်စည်းထိမ်းသိမ်းလာတဲ့ အချစ်နဲ့ သိက္ခာကို ထင်ယောင်းထင်မှားဖြစ်အောင် ပြောဆိုပြီး သင်ရဲ့ အချစ်ကမလေးနက်ဘူးထင်လာအောင် ဖျားယောင်းနေခြင်းကို သင်ရှောင်ကျဉ်နိုင်အောင် ထိန်းသိမ်း နိုင်ပါစေ။
၆။ မောင်ကလဲ သူများတွေလဲ ဒီလိုပဲနေကြတာပဲ လို့ပြောဆိုလာလျှင်
သူများကတာနဲ့ သင်ကို ကိုင်ပေါက်လာပြီဆိုလျှင်တော့ အဲလိုအလွယ်တကူခေါင်းညိမ့်တတ်တဲ့ သူများ တွေဆီပဲ သွားနေလိုက်တော့ ၊ ငါနဲ့လာမပတ်သတ်နဲ့တော့ ဟု ယောက်ကျားမာန နှင့် ရဲရဲသာ ပြောပလိုက်ပါ။
၇။ ချစ် ဘယ်သူကိုမှ မပြောပါဘူး၊ ချစ်ကိုယုံပါ မောင်နဲ့ချစ် ကလွဲလို့ တစ်ခြားဘယ်သူကိုမှ မပြောပါဘူး ဟုပြောလာလျှင်
အဲဒီ အချိန်ကာလလေးတစ်ခု အတွက်တော့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ချစ်စိတ်မွှန်နေတဲ့ အချိန်မှာ မှန်နိုင်ပေမဲ့ အဲဒါတွေ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူတို့မိန်းကလေးတွေကြားထဲ ပြောနေပေလိမ့်မည်။ ငါမောင် ကိုဘယ်လိုလိမ့်ပြီးခေါ်သွားတာ လေလို့သူအစွမ်းကို ထုတ်ပြောနေပေလိမ့်မည်။
အင်း အဓိကပြောချင်တာကတော့ အခုခေတ်ယောက်ကျားလေးတွေကို ယောက်ကျားသိက္ခာနဲ့ လူပျိုဘဝကို တန်ဖိုးထားစေ ချင်လို့ပါ။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေ လွမ်းမိုးလာတဲ့နောက်မှာ ယောက်ကျားလေးတွေဟာ သိပ်ပြီးမထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စလို့ထင်လာမှာ ဆိုးလို့ပါ။ ယောက်ကျားလေး ဘဝဆိုတာ ကျောက်ပျဉ် ပေါ်က ကြက်ဥ ဖြစ်နေလို့ ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ပါ။ လူရှေ့သူရှေ့တောင် မရှောင် ယိုသူမရှက် မြင်သူ ကြည်နေတဲ့ အချိန်မှာ သင်ကို ဆိတ်ကွယ်ရာခေါ်ဆောင်သွားပြီဆိုရင်တော့ ဘုရားသာ တပေတော့လို့သာပြော ချင်ပါတယ်။ အခုစာလေးက အမည်မသိ စာရေးဆရာကြီးတစ်ဦးရဲ့ စာစုလေးကို အတိုချုံပြီး အသိပေးလိုက်တာ ပါ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အရွယ်ရောက်ပြီး ယောက်ကျားလေးတိုင်း ဖတ်ရှု့ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
Soe Lwin Htoo has written 48 post in this Website..
အိုင် က GTC တတ် နေ တဲ့ ကျောင်း သား လေး ပေါ့ 
View all posts by moesatrain →
Thank you for your post . i like that
……………..Sorry……….Your post is too late.
…………I’ve already sunk for many years………..
…………But i have to be careful for my remain life……………..
ကျုပ်ရဲ့ စာစုလေးကို အခုလို အတိုချုံးပြီး လူငယ်တွေကို တင်ပြပေးတဲ့ moesetrain ကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ….
အမည်မဖော်လိုသော ရှေးစာဆို True Faith
………….I am nearly 70.
………….I also read and follow up this saying……….right !